Par Taratra sur 22/07/2020
Tena mafy, tena sarotra… Tsy inona fa ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 amin’izao, indrindra ho an’ny faritra Analamanga. Mitombo miandalana ihany ny isan’ny namoy ny ainy; eny, na miaka-midina eo aza, ohatra, ny marary ao anatin’ny fahasarotana, ny tranga vaovao amin’ny fitondrana ny tsimokaretina Coronavirus.
Na izany aza, tsy misy mahakivy na mandreraka na mampisaritaka. Mbola tena ao anatin’ny ady izao, ary misy hatrany, ohatra, ny marary sitrana soa aman-tsara. Azo resena fa tsy mbola resy ny valanaretina Covid-19: mitohy ny ady. Miara-dalana amin’izany ny fahavononana, ny fifanomezan-tanana amin’ny fiarovan-tena mba hiarovana ny hafa.
Tsy inona izay fifampiarovana izay fa fifampitokisana ao anatin’ny ady amin’ny fahavalo iombonana, tsy hita maso, tsy mitsitsy, tsy mifidy olona… Mila matoky tena ny tsirairay amin’izay fifampitokisana izay: izay maharo tena no afa-miaro ny hafa amin’ny ady, izay mahery no afa-manome hery ny hafa, izay matoky tena no azo itokisana.
Tsy fahatokisan-tena amin’ny tsy antony hoe mafy be noho ny fananana hery fiarovana, ohatra, na tsy andairan’aretina izany, na tsy taitra raha tsy efa misy soritr’aretina ao anatin’ny fahasarotana, sanatria. Fa fahatokisan-tena amin’ny fahalalana sy fanajana ary fiainana ny fepetra amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao no ilaina.
Tsy izay mikohakohaka na seriserena kely, ohatra, dia hisaritaka hipepipepy etsy sy eroa fa manahy sao tratran’ny tsimokaretina Coronavirus. Tsara ny malina sy matahotra amin’ny hoe fahavalo tsy hita maso, saingy ny fisaritahana tsy amin’ny antony no mety hahazoana ny aretina amin’ny fivoahana ny trano amin’izany, sanatria.
Tsy mety koa anefa ny manao dokotera tena, na mandrimandry manana aretina ka hoe ao anatin’ny fahasarotana vao hikoropaka. Izay no ilàna fahendrena, fahamatorana, fahatokisan-tena amin’izay aleha sy atao. Any amin’ny tahotra sy fitsaboana mila fitoniana izao no raharaha be, na eo aza ny fanajana fepetra fiarovan-tena?